Taxane A9 taxane ah soosaarida boodhka warshadaha sedex waji warshadeyn culus oo nadiifinta faakiyuumka loogu talagalay soosaarayaasha sibidhka ah Soo saaraha iyo Warshadda | Marcospa
A9 taxane cutubyada soo saarista boodhka warshadaha saddex waji warshadeyn culus oo nadiifinta faakiyuumka ah oo loogu talagalay la shiidaalka dhulka
Faahfaahin Gaaban: A9 taxane nadiifinta wasakhda warshadaha ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo waajibaadka culus guud ahaan. Mashiinka marawaxadaha ee bilaashka ah ee ku habboon 24/7 shaqo joogto ah. Waxay ku habboon yihiin is-dhexgalka mashiinnada wax-qabadka, si loogu isticmaalo rakibidda go'an iwm
Sharax Gaaban: A9 taxane cutub soo saar boodh warshadeed sadex waji warshadeyn culus oo nadiifinta faakiyuumka ah oo loogu talagalay la shiidayo dabaqa la taaban karo waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo waajibaadka culus guud ahaan.
Mashiinka marawaxadaha ee bilaashka ah ee ku habboon 24/7 shaqo joogto ah.
Waxay ku habboon yihiin is-dhexgalka mashiinnada wax-qabadka, ee loogu talagalay rakibidda go'an iwm.
Qaybaha soosaarida boodhka A9 ee warshadaha waxay siinayaan macmiilkeeda saddax nadiifin shaandhayn ah: shaandhada gacanta lagu qaato, mishiin si otomaatig ah loo wado, iyo nadiifinta miiraha garaaca wadnaha.
Astaamaha ugu muhiimsan: Waxaa lagu qalabeeyaa matoor marawaxadaha mashiinka sare leh, oo ka shaqeeya 3.0kw-7.5kw
100L taangi karti weyn leh
Dhammaan qaybaha elektarooniggu waa Schneider.
Faaruqinta warshadaha si ay si ammaan ah u ururiso warbaahinta culus sida ciidda, jajabyada, iyo boodh iyo wasakh tiro badan.
Halbeegyada cutubkan soosaarida boodhka warshadaha A9 ee saddexda waji warshadeynta ah ee faakiyuumka nadiifinta ah ee sicirka sagxadda sagxadda qiimaha hooseeya
A9 taxane seddex waji moodal nadiifiyaha warshadaha iyo qeexitaannada:
Danab 380V 50Hz
Awood (kw) 3 4 5.5 7.5 3 4 5.5 7.5 3 4 5.5 7.5
Sawaxanka (dbA) 69 70 70 71 69 70 70 71 69 70 70 71
Mugga taangiga (L) 100
Nooca shaandhada 12-filter jeebka HEPA filter &ldquo;TORAY&rdquo; polyester
Awoodda shaandhada 1.0um> 99.5% 0.3&mu;m ＞99.5%
Nadiifi shaandhada Shaker filter gacmeed Nadiifinta miiraha garaaca wadnaha Nadiifinta mootada otomaatiga ah
Aragti (mm) 24&Prime;x42.5&Prime;x57.8&Prime;/610X1080X1470
Miisaanka (kg) 123 143 166 170 126 146 169 173 129 149 175
Sawirada cutubyada soosaarida boodhka warshadaha A9 taxane ah saddex waji warshadeyn culus oo wasakhda nadiifinta ah loogu talagalay iibinta kulul ee sagxadda dhulka
Hore: Taxane C5 saddex waji nooca nadiifiyaha faakiyuumka warshadaha
Xiga: Taxane A8 Saddex waji faaruq ah oo warshad ah